Nka na ụzụ nkwado - Beijing Zohonice Mma Equipment Co., Ltd.
Ndị ọrụ anyị na-ahụ maka teknụzụ dị maka gị usoro ọ bụla nke nwere nnukwu ọrụ na-aga n'ihu na-aga n'ihu iji hụ na ọrụ ụbọchị nke teknụzụ ọgwụgwọ gị na-arụ ọrụ mgbe niile. Nkwado teknụzụ anyị pụtakwara na anyị kpuchie gị na ihe omume na-adịghị ahụkebe enwere nrụrụ aka, na-enyere gị aka ịmalite na azụmaahịa dịka ọ dị na mbụ yana obere ọgba aghara ruo ụbọchị gị. Ọ bụrụ n’inweghi obi abụọ gbasara ihe ị ga - eme gbasara ngwa ngwa gị, kpọọ ndị otu anyị - anyị na - anọ ebe a iji nyere aka.
Nka na ụzụ uru uru
Tonweta nkwado ekwentị na Melbourne
1. Ndị injinia obodo na-enyere Australia aka
2. Otu ụbọchị zigaara na mbinye ego ngwaọrụ
3. Nbanye na ntuziaka vidiyo
4.Spare akụkụ nnweta ọrụ
Nkwado ụlọ ọgwụ
Rungba ahịa azụmaahịa na-aga nke ọma abụghị obere ọrụ ma na-enwe oke ọ ofụ ọ ,ụ, yana nsogbu. Ọrụ nlekọta ụlọ ọrụ anyị kachasị mma bụ ụzọ anyị si enyere gị aka ijikwa arụmọrụ nke ụbọchị gị, ụlọ ọgwụ, ụlọ ọgwụ ma ọ bụ omume mgbe obere nrụgide na-efu, maxi na-efu arụpụtaghị ma hụ na usoro ọgwụgwọ na-arụ ọrụ ọkachamara. Ọ bụrụ na e nwere mgbe ụbọchị ị na-eche na isi gị. gịnị ma ị kpọọ ndị otu nkwado ụlọ ọgwụ maka ntakịrị ndụmọdụ ndụmọdụ ọkachamara?
Nlekọta nkwado ụlọ ọgwụ
1. Nkwado ụlọ ọrụ ruru eru site na ekwentị na email.
Usoro ọgwụgwọ maka ezigbo ọrụ nke ọrụ ịchọ mma gị
3.Nweta nnweta akwụkwọ, ụdị nkwenye na agụmakwụkwọ onye ọrịa
4.Nweta akwụkwọ nyocha ahụike na ntuziaka physiology
5. jiri vidiyo anyị na-akwado, usoro ọgwụgwọ na ọtụtụ ndị ọzọ
Na Zohonice Beauty Co.Ltd., Anyị na-agụnye mmemme ọzụzụ klas zuru ụwa ọnụ na ịzụta ngwaọrụ gị ma ọ bụ igwe IPL. YAG laser mwepụ mwepụ ma ọ bụ laser mwepụ akụrụngwa. Nke a bụ iji hụ na ị biliri ma jiri obi ike na-agba ọsọ mgbe ị na-eme ọgwụgwọ ọhụụ gị, na-enye gị ohere ịnye ọrụ kachasị mma maka ndị ahịa gị nke na-azụlite iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa na uru ka mma maka azụmahịa gị ozugbo na ogologo oge gbaa ọsọ.
Ngwaọrụ ọzụzụ uru
1. Mmemme na-ekpuchi tiori. bara uru ma gbaa ọzụzụ
2. Mụta ihe n’aka ndị ọrụ aka ụlọ ọrụ ruru eru, ndị ọkachamara n ’ụlọ ọrụ
3. Obi ụtọ na-amụ na anyị na-egbuke egbuke, oge a ọzụzụ ụlọ ọrụ
4. Akwụkwọ ikike nke òkè na-enye mgbe emechara ya
5.Nghara ọrụ oge maka ịdebe ụkpụrụ ọrụ
Tinyere ọzụzụ ngwaọrụ ọkachamara na nkwado ọrụ aka na-aga n'ihu. anyị na-eche na ị nweta okwu banyere ọmarịcha ọgwụgwọ ọhụụ gị dịkwa mkpa maka ọganiihu na uto nke azụmaahịa mara mma gị. Nke a bụ ihe kpatara anyị ji etinye ahịa zuru ezu na nkwado nkwado na ịzụta ngwaọrụ ọ bụla. Ihe onwunwe anyị gbasara ihe niile site na nkwalite Facebook na ihe nkwalite ụlọ. Na n'ezie, anyị ahịa otu bụ na aka inyere ị kwesịrị ị na mgbe ọ bụla mkpa ndụmọdụ na otú iji hụ na azụmahịa gị na-anọghị ka ìgwè mmadụ ahụ.
Ahịa nkwado uru
1. tonweta akwụkwọ mmado. broshuọ, flyer ndebiri na oyiyi ọba akwụkwọ
2. Jiri usoro mgbasa ozi email edere na njikere weebụsaịtị
3.Social media ntuziaka na ọdịnaya maka maxi na-efu ikuku ịntanetị gị
4.Nweta nnabata ọgwụgwọ, ntuziaka ịnye ọnụahịa na isi okwu ndị ahịa
5. Tupu na Mgbe oyiyi ndebiri. vidiyo nkwado na ọtụtụ ndị ọzọ